Tzi the Iceman: Ihe niile I Kwesịrị tomara | Network Meteorology
Tzi, onye ice
Portillo nke German | | Ciencia
Otu ihe mmasi anyi chotara banyere mgbanwe okike mmadu na nchekwaba ya bu Tzi onye ice. O bu ihe gbasara nwoke echekwara n’ime nne ya n’onwa nke 3255 BC. C gburugburu 46 afọ. A chọtara mummy ahụ maka njem nke ndị German abụọ ugwu ugwu na untatzal tupu. A na-ahụta nne mmadụ ochie kacha ochie na Europe niile wee bụrụ onye ama ama maka ịnye nkọwa zuru ezu banyere ụmụ mmadụ dị adị na Copper Age.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara, nchọta na ịmata ihe nke Ötzi onye ice ahụ.
1 Nchọpụta banyere Ötzi onye Iceman
2 Nyocha sayensị
3 Tzi onye ice na omume ọhụụ ya
Nchọpụta banyere Ötzi onye Iceman
Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtawo ihe na-eme ka agbasi ozu nke ozu ahụ pụta. Ọ bụ ọnọdụ nke oke oyi na-ewere ọnọdụ na ndị a tupu o nwere ike na-eme ka ire ere nke ozu wee mee ka ọ dịgide. Mgbe ndị ugwu ahụ hụrụ ozu a ha kwenyere na ọ bụ ozu ọgbara ọhụụ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ ozu ụfọdụ nke ndị ugwu ọzọ ndị oyi na-atụkarị tọrọ atọ n’elu ugwu. Agbanyeghị, ndị nwe obodo Ọstrịa weghachitere ya ma nwee ike ịmụ banyere ezigbo mkpakọrịta nwoke na nwanyị.
A nyochara ozu Ötzi onye Iceman ahụ nke ọma, tụọ xyed, tụọ ya ma deeti ya. A na-ewe ya iwe iji nyochaa ihe ndị kacha mma e nwere ike ichebe ka oge na-aga. Enwekwara ike nyochaa ọdịnaya nke akụkụ ahụ ma nyochaa ya n'okpuru microscope. N'ime ozu, ozu nke pollen achọtara na uwe ya site n'oge ahụ nwere ike ịchọta. N'ihi nchọpụta sayensị nke usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa ekpughere na nke a Nwoke ahụ nwere anya na-acha nchara nchara, otu + ọbara ya, anakporo lactose na nsogbu gbasara obi.
Atụmatụ e nyere banyere morphology nke ozu Ötzi onye iceman bụ na ogologo ya dị ihe dịka 159 centimeters n'ogologo, ọ tụtara kilogram 50, ọ gbara afọ 46. Site na nyocha niile na teknụzụ ọgbara ọhụrụ, achọpụtara na nwoke a nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo, oghere, eriri afọ nje na ọrịa Lyme. Dịka ị pụrụ ịhụ, site n'ọganihu sayensị, enwere ike ịnweta nnukwu ozi site na ozu, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ agadi dị ka nke a.
Ihe omuma nke nwere ike inwe nke pollen nke di na uwe ya bu nke mpi ojii. Black kọfị bụ osisi na-ama ifuru na Alps site na Machị ruo June ma gosipụta nke ahụ Icetzi onye Iceman nwụrụ n'oge opupu ihe ubi na mmalite oge ọkọchị.
Ndị ọkà mmụta sayensị kwadebere nyocha dị omimi iji chọpụta ọtụtụ ozi dị ka o kwere mee gbasara zitzi onye Iceman. Nyocha nke ọka ọka pollen, uzuzu na ihe ndi mejuputara nke enamel nke ezé gosiri na o jiri oge nwata ya dum no nso obodo Velturno.
Na nyocha nke eriri afọ enwere ike igosi na enwere nri abụọ dị nso. Otu n'ime nri ndị a dị nso na 8 tupu ọnwụ ya. Otu n’ime nri ndị ahụ bụ anụ chamois, anụ mgbada na-acha ọbara ọbara, ma werekwa ụfọdụ mkpụrụ osisi rie. O nwere ike ịbụ na ọ bụ ọka a brandi esichara site na einkorn nakwa na erichapụwo ya n’ụdị achịcha. Na eriri afọ ọ ga-ekwe omume ịchọta ụfọdụ osisi blackthorn nke bụ obere plums nke osisi blackthorn na ụfọdụ mgbọrọgwụ.
Site na pollen nke achọtara nri mbụ, enwere ike igosipụta na e riri ya na oke ọhịa coniferous. Pollen ndị ọzọ na-egosi na ọka wit na mkpo ọka enwere ike iwe site n'ubi ụlọ. Nyochaa ọbụna ọnụọgụ pollen ahụ, enwere ike ịchọpụta ọka pollen nke hornbeam. Enwere ike ịchọta ya n'ọnọdụ zuru oke ma ha enweghi mkpụrụ ndụ n'ime ya. Nke a gosiri na ọ bụ pollen dị ọhụrụ na etinyere ya ọhụụ n'oge ọnwụ Ötzi karịa Iceman.
Okwesiri ighota na owuwe ihe ubi na ngwụcha oge ọkọchị na sloes na ọdịda agha gha echekwa ya site na afo gara aga. Ọtụtụ nke mummy mebiri emebi site na okpomọkụ na mgbanwe sitere na njem mmadụ. Nsogbu ndị a mere ka nyocha ọzọ sie ike ma mee ka ọ ghara ikwe omume ịghọta anụ ahụ ndị a. Enwere ike ịpụta ọtụtụ ozi sitere na mummies ma ọ bụrụhaala na ọnọdụ nchekwa ha dị mma. Obere ngbanwe nke okpomoku ma obu onodu gburugburu ebe obibi nwere ike wedata akwara rue ogo di elu nke na enweghi ike imata.
Tzi onye ice na omume ọhụụ ya
N'ihi nchọpụta nke ihe ndị dị na ozu ahụ, ọ ga-ekwe omume ịmata omume ikpeazụ nke Ötzi onye iceman tupu ọ nwụọ. Site na ihe a huru, nwoke a gbaliri ime ka aru di otua dika ogwu o jiri n’aka ya jiri mosa. Enwere ike ikwenye nke a site na ozu nke achọtara n'ime ahụ. Onye a nwere ike ịma banyere ihe na-eme ka akụkụ nke apịtị apịtị wee tinye ya na ọnya ahụ. Ikekwe, mgbe ị banyechara nri ahụ anyị kwurula na mbụ, akụkụ nke akpa ahụ rutere na usoro nri. Ihe a niile nwere ike ịbụ ihe dị mkpa ịtụle ebe ọ bụ na ọ dị oke mkpa na nwoke a nwere ihe ọmụma dị omimi banyere akụrụngwa nke osisi gbara ya gburugburu.
A chọpụtakwara ha Egbugbu 68 na nkwojiaka aka ekpe, 2 na ala ala, 5 na ụkwụ aka nri na abụọ na ụkwụ aka ekpe. Ha bụ obere ìgwè dị iche iche nke ihe otiti ndị na-enweghị usoro a na-achọpụta. Iji mara na icetzi onye ice ahụ nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo na mpaghara ndị a, ekwesịrị iji X-ray mee ihe. Nke a bụ ụdị acupuncture taa.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ötzi onye ice.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Tzi, onye ice
Oke Osimiri Mediterenian